एमालेले माअ‍ोवादीलाई प्रदेश ६ को मूख्यमन्त्री नदिने !::Pathivara News
एमालेले माअ‍ोवादीलाई प्रदेश ६ को मूख्यमन्त्री नदिने !
सुर्खेत, २ फागुन – नेकपा एमालेले केन्द्रमा भएको सहमति विपरित प्रदेश नम्बर ६ को मुख्यमन्त्रीमा लफडा झिकेको छ । उसले मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो हुनुपर्ने सर्त तर्साएको हो । एमालेले प्रदेश नम्बर १, ३, ४ र ५ तथा ६ र ७ माओवादीले लिने यसअघि भएको भद्र सहमति तोड्दै यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।
एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले माओवादी संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीसामू तीनबुँदे प्रस्ताव राखेका छन् । उनले मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो, मन्त्रीमण्डलको आकार र मन्त्रालय भागवण्डाबारे माओवादीको धारणा मागेका हुन् ।
कँडेलले मुख्यमन्त्री आलोपालो हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘केन्द्रको निर्णयको सम्मान गर्दै पहिला उहाँ(महेन्द्रबहादुर शाही) लाई हुनु भनेका छौं । तर, पुरै छाड्न सक्ने अवस्था छैन ।’
४० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २० सांसद छन् । सरकार गठनका लागि २१ सांसद चाहिन्छ । प्रदेशसभामा माओवादीका १३ सांसद छन् ।
एमाले प्रदेश कमिटीले मुख्यमन्त्री माओवादीलाई नदिन नेतृत्वलाई यसअघि नै दबाव दिएको थियो । तर, नेतृत्वले नेताहरुको व्यवस्थापन र पार्टी एकताको भावनालाई आत्मसाथ गर्दै मुख्यमन्त्री माओवादीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
माओवादीले भने एमालेको उक्त माग आफूहरु पूरा गर्न नदिने भएको छ । प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले आलोपालोको माग आफ्नो तहबाट पूरा नहुने बताए । उनले केन्द्रबाट भएको निर्णय केन्द्रले नै मिलाउने भएकाले आफू केही गर्न नसक्ने बताए ।